Download Google Music Player u iPhone, Android iyo PC
> Resource > Android > Download Google Music Player for All Ajandooyinka
Google Music ugu horayn kuu ogolaanaysaa inaad ciyaaro aad music on Internetka la isticmaalayo ciyaaryahan web-ku salaysan. Taas macnaheedu waxaad u baahan tahay in la furo ilaa biraawsarkaaga iyo sii page in xagga hore ee jeer oo dhan. Haddii aadan jeclaan sida Google Music shaqeeyaa sidan oo kale, kaliya aad u hesho naftaada ah ciyaaryahanka Google Music . In this article, ciyaartoyda Google Music waxaa lagu tijaabiyaa oo la xaqiijiyay in uu noqdo mid waxtar leh.
Google Music Player u iPhone / iPad / iPad
Rasmi Ah Google Music Player u Android
Bedelan karo Kale
In aan article ee la soo dhaafay, waan idin ​​tusay sida ay u muusiko ku ah iPod, iPhone ama iPad aan codsi kasta . Iyada oo aad Google account iyo password, waxaad ka heli doontaa ah user interface app-sida inuu u ciyaaro Google Music. Waxaad ka badalan karaa goobta desktop haddii aadan u jeceshahay ama aad u hesho si fudud ciyaaryahan Music hooyo macruufka Google ayaa lagu sii daayay Apple Store. Wixii $1.99, aad qabto astaamaha oo dhan (sida hoos ku qoran) oo ku saabsan iPhone, iPad iyo iPod.
Loading jeer si dhakhso ah, sida caadiga ah wax ka yar 10 ilbiriqsi ilaa aad ka ciyaari kara.
Screen-dhexgalka Lock la macruufka 5
Last.fm Scrobbling (in goobaha)
Ciyaara ee asalka ah si aad u isticmaali kartaa codsiyada kale ee aad inta aad dhagaysanayso aad music
Playlist Free waxay Gadan
Kala soco qaababka kale ee cusub ee soo socda ugu dhaqsaha badan.
Laga bilaabo maalinta mid ka mid ah Google Music sii daayo, a ciyaaryahan Google Music for Android ayaa lagu dhawaaqay. Waxaad si fudud u heli karaan Market Android lacag la'aan. Waa ciyaaryahan music khafiifa, nadiif ah oo degdeg ah, sida ciyaaryahanada kale ee guud. Waa maxay ii soo bandhigay waa in ay ku badbaadin karto cadcad aan u offline helaan oo loo maqli karo iyo sidoo kale isla wadaagaan play full free ah heesaha aan laga soo iibsaday suuqa Android ay saaxiibbadayda la Google+.
Google Music Player u Desktop PC
Ma rabtaa in aad codsiga desktop aad Google Music xakameeyo la keyboard multimedia ama badhamada bar shaqo? My jeedin noqon lahaa labada Music ah Google Player ama ciyaaryahan music desktop lacag la'aan ah, ka Wondershare Player .
Haddii aad raadineyso weeyna dabacsanaan dheeraad ah marka la eego in la soo dejisan ka badan oo jecel raadkaagu awoodo, in aad u baahan in la beddeli karo kale sida AllMyTube . Waa socon u download iyo rakibidda on kumbiyuutarada ka hawlgala labada Windows iyo Mac. AllMyTube Waxay ku siinayaan fursad u dejisan videos music dheeraad ah ka video online goobaha caanka ah sida Youtube oo aad noqon doonaa si loogu badalo ka YouTube ee file video qaab wax soo saarka ku habboon loo maqli karo doorashada ah awoodaan. Interface waa mid aad u user-friendly ah oo toosan.
Haddii aad u baahan tahay tilmaamaha dheeraad ah oo ku saabsan sida aad kala soo bixi kartaa oo aanay u faylasha aad, fudud ka soo hubi halkan . Sida doorashooyin badan oo qaabab wax soo saarka, ee kama dambaysta ah Video Converter noqon doonaa anfacaya. Waxaa kor u taageertaa 150 qaabab kala duwan oo la soo saarka editor ka dhisay-in sidoo kale presets ee ugu fiican video goobaha ugu laguugu sahlo. On top of in, ka dhabayso 30X dhakhso leh AAN tayada khasaaro! Waxaa Fiiri naftaada!
4 Siyaabaha Daawo Lugood Movie on Android
Top 7 lagu bedelan karo Lugood Apps u Android
Sida loo Download Apps on Samsung Galaxy S3